Geedka basasha | December 2019
Ugu Weyn Ee Geedka basasha
Maxay ugu beeraan basasha jiilaalka? Dabcan, si goos goos ah, sida ugu horreysa qaybta labaad ee May, beergooyska waa la goostay, halka basasha dayrta ay u bislaadaan laba ama bilo ka dib. Sidoo kale, basasha, hibernating dhulka, ka sokow in uu hore u caleemaha, waa ka badan adkaysi u cudurada, yar u nugul dareenka cayayaanka.
Talooyinka ugu sarreeya ee ku saabsan daryeelka iyo abuurista geedaha
Basasha - warshad lagama maarmaan ah ee arsenal ee ku dhowaad dhammaan martida. Waxay siinaysaa suxuunta udubdhexaadka ah waxayna kobcisaa dhadhanka, iyo urta dabeecada waxay bixisaa alaabooyinka cunnada leh caraf udgoon. Inta badan kijiska waxa aad ka heli kartaa basasha, laakiin waxaa jira kuwo kale, oo aan lahayn noocyo qiimo leh.
Geedka iyo koritaanka basasha ee Shiinaha
Kobcinta basasha ee habka Shiinaha waa ikhtiyaar aad u wanaagsan si aad u hesho miro iyo caafimaad leh goosashada basasha, taas oo leh tayada dhadhanka sare iyo waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer. Iyadoo beerista noocan oo kale ah, basasha waxaa la helaa qiyaasta aan caadi ahayn, oranji dhalaalaya, waxoogaa macaan ah. Muuqaal aad u kala duwan oo ka mid ah goosashada laga helay habkan ayaa ah in madaxa madaxa basasha leeyihiin qaab yar oo qaabaysan.
Waxaan ku koraan basal batun ah ee beertaada: sifooyinka beeritaanka iyo daryeelka
Joogitaanka basasha ma sameyn karaan tiro badan oo suxuun iyo diyaarin, maaddaama ay tahay warshadani oo ku dhawaaqday dhadhanka alaabooyinka waxayna siisaa sharaf. Si kastaba ha noqotee, noocyada kala duwanaanta dhaqankan kuma koobna caleemaha caanka ah, iyo bedel wanaagsan ayaa ah basbalka batun, kaas oo lagu sharaxay hoos.
Waxa la qooyay basasha ka hor intaan la beeri, farsamaynta basasha ee kiniinka potassium iyo cusbo
Marka ugu horaysa, geedi socodka koritaanka baskani ma aha mid adag oo aan haysan kareynin, laakiin tani ma aha kiiska, maadaama inta badan beeralayda ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo lagu xalin karo si fudud adoo raacaya talooyinka xirfadlayaal khibrad leh. Dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah abuurista xad-dhaaf ah ee dhirta, taas oo yaraynaysa suurtagalnimada helitaanka madax weyn oo cufan.
Sida loo kobciyo basasha sharabka: shuruucda beeraha iyo daryeelka
In cunto badan oo kariska oo la helay basasha. Dabeecadda, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah noocyada, qaar ka mid ah iyaga waa la cuni karaa. Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad ka baran doontaa waxa qaansiirta xagjirka ah, agrotechnology ee beerto iyo nooca daryeelka loo baahan yahay. Ma taqaanaa? Suugaanta baska ayaa ka sarraysa dhammaan basasha kale ee ku jira qaybaha raad raacda. Waa maxay baska jilicsan ee loo yaqaan 'slizun' (slizun) Waa nooc khudradeed oo ka mid ah geedo basbaas ah.
Xeerarka abuurista basasha ee madaxa guga
Guga ee basasha waxaa lagu beeray karaa ma aha oo kaliya on baaldiga, laakiin sidoo kale on madaxa. Dhanka kale, waxay u muuqataa in aanay jirin nidaam sahlan: in la xoqo madaxa yar ee dhulka, iyo dayrta si ay u goostaan ​​dalag badan. Xaqiiqdii, si aad u hesho natiijada laga filayo, waxaad u baahan tahay inaad barato qaar ka mid ah sifooyinka khudaarta sii kordhaya ee la mid ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka basasha 2019